Wayne Rooney Oo Markii Ugu Dambaysay Xidhanaya Calaamadda Kabtanka Xulka Qaranka England | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Wayne Rooney Oo Markii Ugu Dambaysay Xidhanaya Calaamadda Kabtanka Xulka Qaranka England
(15-11-2018) Cayaartoyga ugu goolasha badan taariikhda xulka qaranka England ee Wayne Rooney ayaa xidhan doona calaamadda kabtanka iyo lambarkiisii uu caanka ku ahaa ee 10 maalinta Khamiista.
33 jirkan ayaa ciyaar lagu sagootiyayo oo dhex-mari doonta England iyo Maraykanka waxa ay ka dhici doontaa garoonka Wembley ee magaalada London, halkaas oo uu ku tiirin doono kabaha xulka dalkiisa uu u xidhan jiray, funaanaddiisii iyo calaamaddii kabtanimada.
Rooney ayaan kusoo bilaaban doonin ciyaarta waxaana uu kasoo garab muuqan doonaa tababare Southgate, laakiin beddel ayuu kusoo geli doonaa qaybta labaad, waxaana markaas calaamadda kabtaninimada ku wareejin doona Fabian Delph oo xidhnaan doonta qaybta hore.
Marka uu Rooney garoonka soo gelayo ayaa waxa loo samayn doonaa saf-sharafeed ay ciyaartooyada Maraykanka iyo Ingiriisku dhanacyada ka istaagi doonaan halka uu kasoo gelayo garoonka iyagoo sacabka u tumi doona, waxaana u istaagi doona dhamaan taageereyaasha garoonka qaadka weyn ee Wembley usoo daawasho tegi doona.
Ciyaartan oo si toos ah looga daawan doono shabakadda ciyaaraha ee cadalool.com, ayaa waxa weeraryahankan hore ee Manchester United iyo Everton ay u noqon doontaa middii ugu dambaysay ee soo afjarta 119 kulan oo uu xidhnaa shaadhka dalkiisa oo uu u dhaliyey 53 gool.
Xulka qaranka England oo la ballansan Axadda Croatia oo garoonka Wembley kula ciyaari doona, ayaanu Rooney kala qayb-geli doonin, waxaana uu dharka siibi doonaa ka hor ciyaartaas.
Laacibka Manchester City ee Delph oo kabtanimada ku wareejin doona Rooney, ayaa waxa uu sheegay in xilligii uu kusoo biiray xulka qaranka England uu qofkii soo dhaweeyey ahaa Wayne Rooney, waxaanu yidhi: “Markii iigu horreysay ee aan xulka ku biiray, Wayne ayaa ahaa kabtanka. Wuu isoo dhaweeyey, gacanta ayuu i qabtay, waxaanu i dareensiiyey inaan gurigaygii joogo. Isla marka uu garoonka soo galo, waxaan u celin doonaa kabtanimadiisii.”